China KF900A Portable Intellect IEC61850 IEDs Analyzer Test mpanamboatra sy mpamatsy | Kingsine
Fanamafisana herinaratra bateria lithium namboarina, misy habeny kely, lanja maivana, fiasan'ny efijery LCD feno, asa fitiliana mahery vaika, sns., Mba hahafeno ny fepetra takian'ny fanandramana iraisan'ny rafitra, fametrahana sy fanirahana, fiasa sy fikojakojana ary fanofanana fahaiza-manao manan-tsaina substation.
KF900A dia famaritana vaovao momba ny tester protection digital relay fiarovana optika, ary mitondra traikefa miasa vaovao ho an'ireo mpampiasa.
Ny tester relay nomerika kely indrindra, ny efijery LCD capacitive definite 10.4 inch, ny masinina iray manontolo
Fiaraha-miasa fitiliana fiarovana manerantany, Miaraka amin'ny fiasa feno amin'ny fitsapana Manual, ny seza ho an'ny fanjakana, ny Harmonika, ny fitiliana, ny fahasamihafana, ny elanelana, ny elanelan'ny fiovan'ny toetr'andro, ny fihenan'ny zero, ny faneriterena, ny fitarihana herinaratra, ny tahan'ny fahasamihafana. Fitsapana fitsinjaram-pahefana tahiry, fahasamihafana amin'ny Busbar, fitsapana matetika, fitsapana Dv / Df, sns.
Miaraka amin'ny asan'ny serivisy serasera MMS, ny lanjan'ny santionany amin'ny fanaraha-maso ny fotoana tena izy, ny fidirana / famoahana binary, ny hetsika fampitandremana momba ny fiarovana sy ny fandrefesana ary ny fifehezana. Tohano ny famerenana ny famelana ny famakiana an-tserasera, manova ary manova ny faritra. Tohano ny takelaka fampitana fampitaovana / alefa, alefa / vonoy.
Miaraka amin'ny laharam-pahamehana fanandramana fiara fitateram-paritany faharoa, amin'ny alàlan'ny fandefasana hafatra SV sy GOose, ary fandraisana valiny MMS izay namorona loop mihidy, mahatsapa fitsapana mandeha ho azy ny terminal virtoaly;
Manohana ny fizahana tsy tapaka ireo rakitra maodelin'ny fitaovana IED. Makà ny maodelin'ny fitaovana IED an-tserasera amin'ny alàlan'ny MMS, ampitahao amin'ny rakitra maodely SCD eo an-toerana, ary alao ny valiny tsy miovaova amin'ny maodely;
Miaraka amin'ny fiasa ambadiky ny fizahana sy ny fizahana fanandramana fanaraha-maso, amin'ny alàlan'ny fanafarana rakitra SCD, dia afaka maka tahaka ny fitaovana fiarovana, fandrefesana & fanaraha-maso handefasana famantarana fatra lavitra, fambara fanaraha-maso ary famantarana hafa, fidirana amin'ny tambajotra sosona fanaraha-maso ny onjam-peo amin'ny alàlan'ny protokol MMS, ifandraisany amin'ny fototra ary ny fitaovana lavitra, mety sy haingana dia mitarika ny hetsika fanairana rehetra, manova ny fanjakana switch na ON, na OFF, ary ny sanda ankehitriny, ny herinaratra ary ny herinaratra mba hahatratrarana ny fanandramana fanaraha-maso miaraka amin'ny tontolon'ny fanaraha-maso na ny gara lehibe;
Tohano am-panafarana ny latabatra teboka Excel, mahazo fakan-tsarintany amin'ny fantsom-pamantarana fantsom-pamantarana lavitra sy fambara fanaraha-maso amin'ny alalàn'ny rakitra SCD, mamokatra ho azy ny tabilaon'ny mari-pamantarana station, ary mampita mivantana ny signal remote control sy ny signal remote control araka ny laharana isa;
Miaraka amin'ny SV, fiasa fanaraha-maso hafatra GOose. Fampisehoana amin'ny fotoana tena izy ny amplitude, ny fatra, ny fahita matetika, ny endrika onjam-peo, ny kaody loharanom-pahalalana ary ny valin'ny hafatra, ny fampisehoana amin'ny fotoana tena GOOSY ny fipetrahan'ny terminal virtoaly ary ny kaody loharanom-hafatra, ny firaketana ny terminal virtoaly isaky ny mandeha ary andramo ny fomba fampitana hafatra GOose;
Manohana ny fanemorana ny fandefasana, ny fahamendrehan'ny hafatra SV, ny fahamendrehan'ny output SV, ny fampielezana ny fotoana sy ny fandrefesana ny marim-potoana;
Manohana ny fampisehoana sary ny rakitra SCD, mampiseho sary mifandraika amin'ny fifandraisana IED sy ny fifandraisana amin'ny tadivavarana terminal virtoaly; miaraka amin'ny lahasa fampitahana rakitra SCD, ary miteraka tatitra fampitahana;
Ny mpandray hafatra amin'ny fotoana tena izy dia ampitahaina amin'ny fisie SCD hahazoana fanamarinana tsy miovaova ny rakitra SCD;
Tohano ny fandraisam-peo sy ny famafana PCAP fandinihana ny asa an-tserasera, miaraka amin'ny lahasa famerenana hafatra PCAP.
Tohano ny fandefasana IRIG-B fandefasana, azo ampiasaina ho loharanom-potoana, miaraka amina fantsona 6 famantarana IRIG-B fibre misaraka.
Tohano ny lahasa fanaraha-maso Polarity, fanohanana ny fampiasana DC fomba hijerena ny polarity ny fiarovana / metering core an'ny electromagnetic transformer ankehitriny sy ny electronics transformer ankehitriny;
Miaraka amin'ny asan'ny fandrefesana herinaratra optika, ny fizahana ny dingana ivelan'ny tranokala, ny famatsiana herinaratra bateria lithium ao anatiny, ny ora fiasana dia mihoatra ny 8 ora tsy tapaka.
Seranan-tsambo 8 tsiroaroa, seranan-tsambo LC, 1310nm ny halavan'ny onjaNy iray amin'ireo seranan-tsambo optika dia modely optika 1000M voatokana, izay mety amin'ny tambajotra 1000M.
Seranan-tsambo serial 8, seranan-tsambo ST, 850nm ny halavan'ny onja6 mandefa, 2 mandray (Azo ampiasaina ho FT3 na IRIG-B)
Seranan-tsambo Ethernet 1 rehefa100Base-TX ， RJ45
Seranan-tsambo GPS Fantsona 1, mpandray fambara GPS anatiny
Seranan-tsofina fampidirana an-tsoratra (Tsy voatery) 4 na 8 tsiroaroa, 18 bit AD, tahan'ny santionany 40kHz, fari-input 0-250VAC
Fandraisana fidirana binary mimanda 1 Pair, Fifandraisana tsy misy poakaty na fifandraisana mety (30 ~ 250V), ora famaliana ≤500μs
Vokatry ny mimari-droa fifandraisana Mpivady 1, karazana Open-manangona, fanakanana mihoatra ny 250V, 0.3A (DC), ny fotoana famaliana ≤ 100μs
Refesina ny refy Fahadisoam-pandrefesana sy ny fandrefesana ankehitriny ≤0.05%Ny fahamendrehana matetika dia tsara kokoa noho ny 0,001Hz eo amin'ny 15 ~ 1000HzFahadisoana amin'ny refy fandrefesana dingana ≤0.01 °
fandefasana ny Fahamarinana hadisoana sy refy fandrefesana ankehitriny ≤0.05%Ny fahamendrehana matetika dia tsara kokoa noho ny 0,001Hz eo amin'ny 10 ~ 1000HzFahadisoam-pahaizana famoahana dingana Ph0.01 °
Fanaparitahana ny vokatra SV ≤ ± 80n
Fanemorana ny famindrana seranan-tsambo serial ≤100ns
Ny output SV dia ampiarahina Hadisoana eo anelanelan'ny seranan-tsambo Fiber <1μs
Herin'aratra Kitapo bateria lithium lehibe anatyAdapter Power ： Fampidirana 220VAC / 50Hz ， -20% ~ + 20%Output DC 15V ± 10%
Asehoy Efijery LCD capacitive voafaritra 10.4 mirefy (efijery mikasika)
Habe 320mm × 250mm × 100mm (L × W × H)
Teo aloha: K2063i Universal Relay Test napetraka
Manaraka: KF86 Intelligent Relay Test napetraka
Fitsapana fampitàna lavitra, Fitsapana fampitana mivantana, Fitsapana fampitana niomerika, Fitsapana fampitàna an-tsokosoko, Fiarovana Relay Tester, Fitsapana fampitana, Vokatra rehetra